တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကုန်ခန်းလာတဲ့ ရိုးသားမူ ……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကုန်ခန်းလာတဲ့ ရိုးသားမူ ………..
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကုန်ခန်းလာတဲ့ ရိုးသားမူ ………..
Posted by နွယ်ပင် on Jul 14, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., Myanma News | 21 comments
လူတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ့်ကျင့်တရားနဲ့ သိက္ခာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါသလဲ ……………..
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရိုးသားမူကရော သူ့ ဘဝအတွက် ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရှိနေသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ……………..
အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ အဲလူအတွက် ရိုးသားမူနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကရော ဘယ်နေရာလာက်မှာ ရှိနေသင့်ပါသလဲ ………….
ဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေ ဝင်လာရတာက ………………
မနေ့ကတော့ အလုပ်က ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အစိုးရဘဏ်တစ်ခုမှာ ငွေသွားထုတ်ရမယ့်ကိစ္စကပေါ်လာတယ် အရင်က အပြင်က ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေနဲ့ပဲ လုပ်နေကြဆိုတော့ အခုစိုးရဘဏ်ဆိုတော့ နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ (10း00) နာရီလောက်ကတည်းက ဘဏ်ကိုရောက်နေတာ (11း 00) နာရီထိုးတဲ့ အထိငွေက မရသေးတော့ တာဝန်ရှိသူကိုသွားမေးတော့ ငွေလွှဲတဲ့ စာကတော့ ရောက်ပါပြီ ဒါပေမယ့် ဘဏ်ထဲမှာ ငွေမရှိသေးတော့ ခဏလောက်စောင့်ရမယ်တဲ့ အဲတာနဲ့ စောင့်နေတဲ့ သူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်အပြင် (9/10) ယောက်လောက်၇ှိနေတော့ မြန်မြန်လေးရအောင်နဲ့ နောက် (5000) တန်လဲ လိုချင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး တစ်ဆက်တည်းသူ့ကိုမေးလိုက်တယ် ငွေထုတ်ပေးတဲ့ သူနဲ့ ညှိလိုက်ပါဆိုလို့ ငွေထုတ်ပေးတဲ့ မန်နေဂျာနဲ့ ဘာဘာညာညာလေး နည်းနည်းညှိလိုက်တော့ နောက် နာရီဝက်လောက်လဲ ကြာရော ပိုက်ဆံရလာတယ် စောင့်နေတဲ့ သူတွေထဲမှာ ကိုယ်က အရင်ဆုံးရတာနော် ကံထူး၇ှင်ပေါ့ ….
ရလာတဲ့ထဲကတစ်ချို့ တစ်ဝက်ကို ဘဏ်တစ်ခုမှာ သွင်းစရာလေးရှိနေတော့ မြဝတီဘဏ်ကို ဆက်သွားဖြစ်တယ် အဲမှာ စတာပဲ ဇာတ်လမ်းက အစိုးရဘဏ်က ထုတ်လာတဲ့ ငွေနဲ့ပဲ သွင်းဖြစ်တာကို မြ့ဝတီဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံရေတော့ ပိုက်ဆံက လျော့နေတယ် လျော့တာကလဲ တစ်ထောင်တန် တစ်အုပ်က (88) ရွက်ပဲပါပြီး နောက်တစ်အုပ်ကတော့ (5) ရွက်လျော့နေတယ် သွင်းရမယ့်ပိုက်ဆံက သုည(7)လုံး အထက်လောက်မှာ လျော့နေတဲ့ငွေက စုစုပေါင်းလိုက်ရင် (28000) လောက်ရှိတော့ မြဝတီဘဏ်ကတောင် မေးတယ် ဘယ်ဘဏ်ကထုတ်လာတာလဲတဲ့ ဘဏ် ( ) ကပါဆိုတော့ ” ဟုတ်တယ်တဲ့ အဲ့ဘဏ်ကနေထုတ်လာတာ ဟိုတစ်လောကလဲ ငွေတော်တော်လေးလျော့ နေတယ်တဲ့ သူတို့ဘက်ကတော့ လျော့တာ သေချာတယ်ဆိုတာ မှတ်တမ်းယူထားပေးပါတယ်တဲ့ ….”
ဒါနဲ့ ကိုယ်တွေလဲ မှတ်တမ်းလေးယူပြီး ပြန်လာခဲ့တာပေါ့
အဲတာနဲ့ လမ်းမှာ တွေးမိတာက အစိုးရဘဏ်ဖြစ်နေပြီ ငွေသွားထုတ်တာ အဲ့လောက်တောင်ကွာရလားပေါ့ ဒါတောင် ငွေက အကုန်မဟုတ်သေးဘူး တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကျန်သေးတယ် အလုပ်ပြန်ရောက်လို့ ငွေရေလိုက်ရင် ဘယ်လောက်တောက် ထပ်လျော့နေဦးမလဲ ဘဏ်မှာ ငွေထုတ်တုန်းကလဲ ဘာဘာညာညာ
ညှိခဲ့ရတယ် နောက်အစွန်းထွက်ပိုနေတဲ့ ပိုက်ဆံ (8000) ကိုလဲမပေးလိုက်ဘူး အစိုးရဘဏ်ဖြစ်ပြီး အဲ့လောက်တောင် အခြေအနေက ဆိုးနေပြီလားဆိုပြီ ရင်မောမိတယ် ………….
တခါတုန်းက အစိုးရဘဏ်တခုရဲ့ ငွေကိုင်တယောက် အဲသလိုပဲဖြစ်တာများလို့ မိတဲ့အခါ အချုပ်ကြတယ်။ သူ့ကို ပစ်ထားကြလို့လို့ အချုပ်ထဲကနေ လှမ်းပြောတယ်၊ ငါတယောက်ထဲ သွားမယ်မထင်နဲ့ အကုန်လုံးဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့မှ သူနဲ့သက်ဆိုင်သူ ဆက်ရှင်များက ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး သွားရောက်ကြည့်ရှု ဖေးမကူညီရတယ်။ ပြန်လွတ်တယ်ကြားတယ်၊ ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ လုပ်လိုက်သည် မသိ… ဒန် တန် တန် ….
ရိုးသား ကြိုးစားလျှင် ဒိုးပြားရတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့လည်း အချိုချောင်လေးတွေ ဖန်တီးရတာပါတဲ့ ကွယ် ငှဲငှဲ
အချို အချောင်လေးက တရားဝင်လဲ ယူပြီးပါပြီ etone ရယ်
နောက် အစွန်းထွက်ကလဲ အချိုအချောင်လေးထဲမှာပါမှာပေါ့
အခုဟာက ထုတ်တဲ့ငွေထဲမှာ စုစုပေါင်းအလျော့ (53000) တောင်
အားလုံးပေါင်းရင် သူတို့ အချိုအချောင်က ငွေတစ်ခါထုတ် (80000) လောက်နီးနီးဆိုတော့
ီနိုင်ငံတော်အသစ်ကြီးတည်ဆောက်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ရင် နိုင်ငံတော်ကို ဥုံဖွ အပ်ချလောင်းလုပ်ပြီး သစ်ပစ်လိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး
တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို အသစ်အသစ်ကောင်းအောင်ပြင်မှရမှာ
လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကို ၀ိုင်းဝိုင်းလေး ကွေးပြီး ထိပြလိုက်ရင် .. အဆင်ပြေပါတယ် ..
အခုခေတ်က .. ရိုး .. စားမလောက် .. ကောက် .. သိမ်းမကုန် ..
(ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ဒီဘ၀အတွက်တောင် မသေချာတဲ့ ငွေတွေပါ .. နောင်ဘ၀အတွက်တော့ အကုသိုလ်တွေ တထမ်းကြီး ပါသွားမှာ)
ဒီဘဝအတွက်တောင် မသေချာတဲ့ ငွေတွေကို ဒီလောက်လောဘတက်နေတာ
နောက်ဘဝဆိုတာကတော့ သူတို့အတွက် မတွေးထားတဲ့ အရာပေါ့ ဒေါက်တာရယ်
ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့လို့ မပြောတော့ဘူး … ဟူးးးးးးး ……………
မရိုးသား ကြိုးစား အာရကေကြားပေါက် အားဖြင့် နိုင်ငံတည်
အဲလို လုပ်တာ ကို အောက်စိုက်လို့ ခေါ်မလား .. ။ ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။
အသိတစ်ယောက်လည်း ပိုက်ဆံ သိန်း၁ထောင်ကျော်ထုတ်တာ ၁၀သိန်းလောက် လိုနေတာကြုံဖူးတယ်။
အင်း ခေတ်ကြောင့်လား လူကြောင့်ပဲလား
သေသေ ချာချာ ရေ တွက် ပြီးမှ သွားအပ် တောင် နဲနဲ လေး လစ် တာ နဲ့ လျော့ သေးတာ။
သူတို့ ဆီ က ထုပ် မဲ့ ငွေ ကတော့ …………။
(ယောက္ခမ ပိုက်ဆံ ၁၀ သိန်း သွားအပ်ပေးတာ သေသေချာချာ တော့ ကြည့် နေတာပဲ။ ကိုယ့် အနောက် တယောက်ယောက် က တခုခု မေး တယ် ထင် လို့ လှဲ့ ကြည့် မိတာ တသိန်းအုပ် တအုပ် က တသောင်း လျော့ သွားတယ်။ )
အဲ့ဒါ အဟုတ်လျော့တာ ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့ ဦးလေးတယောက်ဆိုရင် သူများလှူထားတဲ့ငွေကို တာဝန်ခံပြီး ကူညီတာဆိုတော့ သူ အကုန် စိုက်ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့ … လျော့သွားတဲ့ ပိုက်ဆံကို
အင်း ခေါင်းဆောင်တွေက မဟုတ်တော.လည်း
နောက်လိုက်တွေက ဘာထူးမှာလည်းဆိုပြီး ဆက်လိုက်တော.တာပေါ.
အဓိကတော. ကိုယ်.ရဲ. ကိုယ်ကျင်.တရား ပါပဲ
သတင်းတွေ ကြားရတာ ကြောက်စရာကြီးပါလား..
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘယ်သူနဲ့ ငွေပေးငွေယူ လုပ်လုပ် တစ်ရွက်ချင်းစစ်ဆေးယူဖို့ ချစ်သောဖေဖေက မှာကြားခဲ့ပါတယ်..။ သူနဲ့ အပေးအယူလုပ်ရင်တောင် စစ်ဆေးယူရမယ်တဲ့ (ဒါ သားအဖချင်းနော်) ။ အဲဒိအလေ့အကျင့်နဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရလို့လားမသိဘူး..။ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပါတ်သက်လာရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံနဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာတယ်..။ ကျွန်တော့ရဲ့ အခုတင်နေတဲ့ ပို့ စ် နောက်ပိုင်းမှာပါလာပါလိမ့်မယ်…။ မှတ်ချက် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ဘဏ်တစ်ခုမှာ ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖူးပါတယ်..။ လုပ်လို့ရရင် လုပ်မှာပဲ ..။ ငွေကြေးနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ လျော့မတွက်လေနဲ့ ..။ ဒါ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ စရိုက်ပျက်တစ်ခုပဲ..။
ငွေ ငွေ ငွေ လောကမှာငွေဟာလေ လူတန်းစားမခွဲခြားဘဲဖျက်ဆီးတတ်ကြပေ။
(ကျနော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး ငွေဆိုတဲ့ ရှေးသီချင်းထဲက စာသား)
သိ ဂျီး က အဲဒီ လို + မပေးပါနဲ့ တဲ့တိုတိုပေ forum ထဲမှာရေးထားတယ်
အောက်တန်းကျတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေ ပြင်နိုင်အောင်လို့ဘဏ်နာမည်ကိုသေချာဖော်ပြပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ. . .
ဒီအဖြစ်အပျက်သေချာရင် ဆော်သာဆော်ဗျာ. . .
တော်ကြာ ပင်စင်စား အဘိုး၊ အဘွားတွေ ပိုက်ဆံကိုလုပ်လိုက်မှဖြင့်. . .
အဲ့ဒါ ခိုးတာဗျ…. သူခိုးလို့ခေါ်တယ်။ အိနြေ္ဒရတဲ့ သူခိုးတွေပေါ့။